Dowladaha Mareykanka iyo Ingriiska oo ka horyimid muddo kororsiga, kuna hanjabay cuna-qabateyn – Calanka.com
in Gudaha, HEADLINE
Dowladda Mareykanka ayaa uga digtay madaxda Soomaaliya in ay saari doonto cuna-qabateyn iyo in laga xannibi doono dal kugalka Mareykanka, haddii aysan Dowladda Federaalka ka laaban muddo kororsiga uu Aqalka Hoose u sameeyay.
Sidoo kale, Dowladda Britain ayaa ku boorrisay madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada in ay dib ugu soo laabtaan miiska wadahadalka, si ay xal uga gaaraan muranka doorashooyinka dalka.
Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in ay si aad ah uga xamaadeen qaraarkii dowladda fedaraalka ah ee Soomalaiya ee lagu ansixiyay muddo 2 sano ah oo loogu kordhiyay muddo xileed madaxwaynaha iyo Baarlamaanka.
“Waxaan horey ugu celcelinay in ay muhiim u tahay nabadda, xasiloonida, baraaraha iyo dowladnimada Soomaaliya in dowlada fedaraalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ay gaaraan heshiis ku aadan sidii horey loogu sii wadi lahaa geedi socodka doorashada,” ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay wasaarada arrimaha dibada.
Bayaanka ayaa sidoo kale waxaa uu Mareykanka ku celiyay in marnaba aysan taageeri doonin muddo korarsi , doorashooyiin is barbar socda amaba geedi socod hal dhinac ah.
Bayaanka ka soo baxay wasaarada arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa dhanka kale wxaa lagu sheegay in Mareykanka ay dib u qiimeyn ku sameyn doonaan xiriirka ay la leeyihiin dowladda fedaraalka ee Soomaaliya .
Dhanka kale, dowladda Britain ayaa ka hor timid tallaabadii baarlamaanka Soomaaliya ay ku ansixiyeen in muddo labo sano ah loogu kordhiyo hay’adaha dolwadda ee wakhtigoodu dhamaaday.
Bayaanka kasoo baxay dowladda UK ayaa lagu sheegay “Waxaan ka walaacsanahay go’aanka Golaha Shacabkka ay muddo labo sano ah ugu kordhiyeen muddo xileedka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ha’yadaha dowladda”
Waxay intaas ku dartay in go’aankan uusan horseedeyn in xal laga gaaro ismari-waaga ka dhashay arrimaha doorashada.
“Waxaan gebi ahaanba kasoo horjeednaa dadaal kasta oo lagu qabanayo doorashooyin is-barbar socda ah ama hal dhinac ah ama wax muddo kororsi ah”
Dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale sheegtay in hindisa shirciyeeda muddo kordhinta oo la dhaqangaliyo ay caqabad halis ah ku tahay wadaxaajoodyada ayna minjaxaabinayso nabadda iyo ammaanka Soomaaliya.